कम्पनी माला, बुद्धिको नृत्य कस्तो होला ? « OsNepal News
कम्पनी माला, बुद्धिको नृत्य कस्तो होला ?
काठमाडौँ, ३ बैशाख । फिल्म ‘चङ्गा’ को पहिलो गीत रिलिज भएको छ । जेठ २५ लाई प्रदर्शन मिति तोकेको प्रचारको पहिलो सुरुवात भन्दै निर्माण टिमले फिल्ममा समावेश लोक फ्लेभरको गीत ‘कम्पनी माला’ दर्शकमाझ ल्याएको हो । सार्वजनिक गीतमा राजनराज शिवाकोटीको संगीत छ । शब्द राजेन्द्र थापाले लेखेका छन् ।
विकासको भोक सरकारले मेटाउँछ : मन्त्री पोखरेल
देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढिसकेको छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
नेकपा महासचिव चीन प्रस्थान
कम्युनिष्ट सरकारले मुलुकलाई समृद्धि बनाउछ
आठौँले फेरियो ‘कोहलपुर क्रिकेट मैदान’